ကတ်ထူသေတ္တာတစ်ခုအတွင်းရှိကြောင် - ယောက်ျားလေးများအချစ် - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
ကတ်ထူပြားသေတ္တာထဲမှာကြောင် ပျမ်းမျှ4/5ထဲက 4
N / A, 14.4K အမြင်များရှိသည်
သစ္စာရှိခွေးဖြစ်သော Winter ကိုဆုံးရှုံးပြီးနောက် Ji Seungwoo သည် ၂၂ နှစ်ကြာပေါင်းဖော်ခဲ့သောအစားထိုးမရနိုင်သောဆုံးရှုံးမှုနှင့် ၀ မ်းနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ဒဏ်ရာရသည်။ ဒါပေမယ့်တစ်နေ့မှာတော့သူ့အိမ်ရှေ့ကကတ်ထူသေတ္တာဘေးမှာစောင့်နေတဲ့ချစ်စရာကြောင်ငယ်လေးကိုတွေ့လိုက်တယ်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးကြင်နာတတ်သောနှလုံးသားရှိသူဖြစ်သဖြင့်သူ့ကိုအိမ်ပြန်ပို့ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်နောက်နေ့မနက်အိပ်ရာထတဲ့အခါသူကချစ်စရာကြောင်ကလေးနဲ့အိပ်ယာထဲမှာမရှိတော့ဘဲအရွယ်ရောက်ပြီးချောမောတဲ့လူတစ်ယောက်လား? "ငါကဒီလူရဲ့ပိုင်ရှင်ပါ!" သူပြောတယ်! Seungwoo နဲ့ Mr. Cat ရဲ့ဆက်ဆံရေးဘယ်လိုတိုးတက်လာလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့ ...
အခန်းကြီး9ဇူလိုင်လ 26, 2021
အခန်းကြီး 8 ဇူလိုင်လ 26, 2021
အခန်းကြီး7ဇူလိုင်လ 26, 2021
အခန်းကြီး6ဇူလိုင်လ 26, 2021
အခန်းကြီး5ဇူလိုင်လ 26, 2021
အခန်းကြီး4ဇူလိုင်လ 26, 2021
အခန်းကြီး3ဇူလိုင်လ 26, 2021
အခန်းကြီး2ဇူလိုင်လ 26, 2021
အခန်းကြီး 1 ဇူလိုင်လ 26, 2021
4chan yaoi, yaoi anime, bakudeku yaoi ဖြစ်သည်, bara yaoi, bdsm yaoi ပါ, furry yaoi ပါ, yaoi အမာခံ, hentai yaoi ပါ, hitomi yaoi, kiribaku yaoi, manga yaoi ဖြစ်သည်, မန်ဂါဂို yaoi, nhentai yaoi, yaoi ကိုဖတ်ပါ, 34 yaoi အုပ်ချုပ်, uncensored yaoi ဖြစ်သည်, yaoi ကဘာလဲ, yaoi anime ပါ။, yaoi animes များ, yaoi bara ပါ, yaoi ကျွန်ခံ, yaoi ရုပ်ပြ, yaoi လက်ဝါးကပ်တိုင်, yaoi နှင့်အဓိပ္ပါယ်, yaoi doujinshi, yaoi ဂိမ်းများ, yaoi gif, yaoi gifs များ, yaoi လက်များ, yaoi ခဲယဉ်း, yaoi ဆိပ်, yaoi ဆိပ်ပြန်လည်မွေးဖွားခဲ့သည်, yaoi hentai, yaoi hentai မန်ဂါ, yaoi hypno ပါ, yaoi မန်ဂါ, Yucateco manga အဘိဓါန်အွန်လိုင်း \_ t, yaoi mangago, yaoi အဓိပ္ပာယ်ကို, yaoi လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု, yaoi nhentai, yaoi nsfw ဖြစ်သည်, yaoi လှော်, yaoi ညစ်ညမ်း, yaoi reddit, yaoi စည်းမျဉ်း 34, yaoi လိင်, yaoi ပြုံးလိုက်သည်, yaoi ဗီဒီယိုများ